Abavelisi bendwangu yokuThintela ukuThengisa - -iFeksi yokuThengisa iMpahla yaseTshayina, abaXhasi
I-65% yePolyester 35% yePotton Fabric
Iipesenti ezingama-80% yePotton Fabric
Iipesenti ezingama-90% yePotton Fabric
Fabric Fabric Uniform Fabric
T / C 65/35 ipeni yelaphu lendlu yelaphu
Umgangatho ofanelekileyo welaphu lekotoni yelaphu lepoplin
Iipesenti ezingama-20% zelaphu lekotoni 80% yepeyinti yokuhombisa
I-10% yekotoni yelaphu edayiweyo eyi-90%
Iipesenti ezingama-35% zomqhaphu wesibhedlele i-65%
Iipesenti ezingama-35% zelaphu lekotoni engama-65%
Ixabiso lento: I-USD 0.7 / Imitha
Uhlobo lwentlawulo: I-L / C, T / T
Incoterm: I-FOB, CFR, CIF
Imizuzu Umyalelo: Imitha ezingama-3000
Ixesha lokuzisa: Iintsuku ezili-15
Ixabiso lento: I-USD 0.72 / Imitha
Ixabiso lento: I-USD 0.64 / Imitha
Ixabiso lento: I-USD 0.59 / Imitha
Ixabiso lento: I-USD 0.71 / Imitha
Ixabiso lento: I-USD 0.0,58 / Imitha
Ixabiso lento: I-USD 0.57 / Imitha
I-10% yelaphu lekotoni engama-90% kwilaphu elisezantsi
Ixabiso lento: I-USD 0.55 / Imitha
Ixabiso lento: I-USD 0.58 / Imitha
Ixabiso lento: I-USD 0.54 / Imitha
I-100% yelaphu lokufaka ipoyinti
Ixabiso lento: I-USD 0.75 / Imitha
Umtya we-warp kunye weft ubethelwe ubuncinci kanye, kunye ne-warp kunye ne-weft interlacing nafasi zongezwa ukuze zitshintshe ubume bendwangu kwaye ngokubhekisele kuzo kuthiwa zi-twill weave. Ubume belaphu ezimbini ...
Impahla yamachiza e-Wholesale Medical Fabric Textile
Kukho iileya ezi-2 kule nto yonyango lwe-TPU. Eyokuqala ilaphu elisisiseko. Yindwangu engalukanga. Umaleko ongezantsi kwifilimu ye-TPU. Yenza indwangu ukuba inganiki umoya kwaye ingabi manzi. Umaleko we-TPU othambileyo ne-elastic ...
Nge-10 ka-Epreli, inkampani yethu yaya eVietnam ukuze ithathe inxaxheba kulo mboniso, ibonisa iimveliso eziphambili zenkampani yethu: Ilaphu leplastikhi, Indwangu yonyango, ilaphu lokwenza iimpahla, kwaye yanika abathengi ulwazi olucacileyo lomlingane ...